Xiddigii Isaga Oo Dhuuban Fasaxa Galay Ee Soo Laabtay Isagoo Muruqyo Waaweyn Leh Oo Sirtiisa Bannaanka Keenay - Gool24.Net
Xiddigii Isaga Oo Dhuuban Fasaxa Galay Ee Soo Laabtay Isagoo Muruqyo Waaweyn Leh Oo Sirtiisa Bannaanka Keenay
Leon Goretzka oo markii ay ciyaaruhu dib u bilaabmeen dunida kaga yaabsaday muruqyo waaweyn iyo isbeddel weyn oo ku yimid jidhkiisa ayaa mar kale soo bandhigay sirtii ka caawisay dhalan-geddiga ku dhacay.
25 jirkan khadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich oo kooxdiisa ka caawiyey inay ku guuleysato horyaalka Bundesliga iyo German Cup, waxa uu waqtigii fayraska Korona uu bilaabmay uu ahaa ciyaartoy dhuuban oo lafihiisu muuqdaan, laakiin markii uu soo laabtay, waxa uu layaab ku riday jamaahiirta kooxda, ciyaartoyda naadiga iyo xataa tababareyaasha.
Muuqaallo uu soo dhigay bartiisa bulshada, ayaa dunida ku faafay, waxaana la isbarbar-dhigay sida uu u ahaa ciyaartoy dhuuban iyo qaabka uu laacibka xoogga badan iskugu rogay muddada kooban gudaheed.
Wargeyska Bil ayaa bilo kaddib xidhiidh la sameeyey ciyaartoygan, waxaanu ka waraystay sirta jidhkiska uu sameeyey iyo sida ay ugu suurtogashay in muddo kooban gudaheed uu ku noqdo ciyaartoy gebi ahaanba jidhkiisa isbeddel ku dhacay.
Leon Goretzka oo ugu horreyn ka hadlaya wixii uu qaban jiray waqtigii go’doonka ayaa yidhi: “Aniga, go’doonkii wuxuu ii ahaa carqalad iyo fursad labadaba. Marka aan dhibaatooyinka eego, waxaan u xiisay kubaddii cadta iyo tababarkii maalinlaha ahaa ee aan kooxda la qaadanayay, laakiin waxaan fursad u helay inaan aad u kobciyo muruqyadayda aniga oo xidhiidh la samayay dhakhtarka.””
Miisaanka usoo siyaaday ayuu ka hadlay sida uu uga caawiyey inuu qaab ciyaareed wanaagsan kusoo bandhigo garoomada, waxaanu yidhi: “Waxay muhiim iigu noqotay ciyaaraha iyo waqtigay, waxa muhiim ah in jidh ahaan iyo maskax ahaan ba aad taam u ahaato. Miisaanku wuxuu iga caawiyey inaan taakallada, wuxuu iga dhigay mid xooggan oo hirdamaya. Kaliya maaha marka aanu dhulka ciyaartoyda iskaga hor nimaadno, laakiin sidoo kale marka aanu kubbadaha sare ugu boodno.”
Shabakadda Bayern Munich iska leedahay ayaa waraysi kale oo uu siiyey waxa uu ugu sheegay in waqtigii uu go’doonka ku jiray uu jimicsiyo badan sameeyey, wax kastana uu tababareyaasha jidh-dhiska ee Bayern kala tashanayay si uu taxadar uga sameeyo miisaankiisa.
Si kastaba, Leon Goretzka hadda waa ciyaartoiy xooggan oo murqaani ah, waxaanu isku diyaarinayaa ciyaarta ay kooxdiisa Bayern Munich ku martiigelin doonto Chelsea lugta labaad ee Champions League horraanta bisha soo socota ee August.